Tembiricha Controller Vagadziri & Vatengesi - China Tembiricha Controller Fekitori
Kutonhora tembiricha controller EK-3030 inoshandiswa mune zvekutengesa mafiriji
4.Two nzira sensor zvinopinda: cabinet tembiricha Switch uye defrost tembiricha sensor.Three nzira kudzora goho: Refrigeration, defrost uye feni.
Yakasarudzika nyowani tekinoroji tembiricha uye humidity controller JSD-100 +
Kuyera kupisa uye kutonga;
Kutanga-kumusoro kunonoka kudzivirirwa;
Input password kugadzirisa paramende.
Akangwara firiji zvikamu thermostat nezvimwewo-200 +
Alarm kana ichidarika temp. Chiyero;
Chinja pakati pefiriji uye kudziyisa;
Tekinoroji nyowani isina mvura inotonhorera yekuchengetera thermostat nezvimwewo-961
Refrigeration uye defrosting basa;
Dzosera kusiyanisa kudzora, tembiricha yekuratidzira resolution 0.1 ℃;
Multi aramu basa.
Mutsva firiji firiji uye defrost kutendeuka thermostat ETC-974
Refrigeration, defrosting, yakawanda modes fan inodzora sarudzo;
Refriji yakachipa-inodhura uye defrost thermostat nezvimwewo-3000
Kambani yedu inoshanda muR & D, kugadzirwa uye kutengesa kwe microcomputer tembiricha controllers uye humidity controllers. Iyo chip inoshandiswa mune tembiricha controller ine yakatsiga mashandiro, akazara mashandiro, akawanda dziviriro, epamberi uye inonzwisisika dhizaini dhizaini uye maitiro ekugadzirisa, uye tekinoroji nhanho iri yepasirose yepamusoro uye epamba inotungamira. Ichi chigadzirwa chine akasiyana mafomu ekushandisa mumunda nemaindasitiri echando uye firiji uye firatio ...
Kutonhorera kuchengetedza firiji uye humidity controller zvikamu JSD-100 +
Ichi chigadzirwa chakashandisa humidity controller, yakanyanya kuvimbika uye yakanakisa kwenguva-refu kugadzikana, nezvimwe;
Inogona kushandiswa zvakanyanya mumuchina wehumidifying, dehumidifier, mhepo mwando;
Chinja humidity kudzora kwemachina uye zvimwe zvishandiso;
Zvakare inogona kushandiswa mukuyera kwehukama hunyoro uye kuratidza.
Yakakwira-mhando dhijitari kuratidza thermostat STC-100A yekugadzira fekitori
Chinja iyo mode pakati pekupisa uye firiji
Kudzora tembiricha nekugadzirisa ese ari maviri tembiricha yekumisikidza kukosha uye mutsauko kukosha
Kunonoka kudzivirirwa kana firiji nekudziya kwatanga
Deredza tembiricha yekumisikidza huwandu
Alarm kana sensor yekukanganisa
Ichi chigadzirwa ndecheyese isina sensor yekushisa tembiricha, ine basa refiriji, tembiricha inopfuura alarm, nezvimwe;
Compressor kudzivirira kunonoka nguva kunogona kugadzirisa;
Mushure mekumesa tembiricha, kukunda alarm kunononoka kugadziriswa.
Inokodzera kutonhorera kutonhora, firiji rori firiji indasitiri, nezvimwe.
Yakasarudzika 220v firiji thermostat STC-1000
Chinja iyo modes pakati inotonhorera uye kupisa;
Chengetedza tembiricha nekumisikidza iyo tembiricha yekumisikidza kukosha uye mutsauko kukosha;
Refrigeration kudzora kuburitsa kunonoka kudzivirira;
Alarm kana tembiricha ichidarika tembiricha muganho kana kana sensor kukanganisa.
otomatiki tembiricha kudzora, Incubator tembiricha controller, thermometer yedhijitari, digital thermostat controller, thermostat tembiricha controller, aquarium yedhijitari thermometer,